Custom Record သိုလှောင်ခြင်း, ကဒ်သိုလှောင်မှု, စုဆောင်းနိုင်သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများ P.Y.P ထုပ်ပိုး
စံချိန်တင် / LP လက်အင်္ကျီလက်
သိုလှောင်မှု box ကိုမှတ်တမ်းတင်
ကဒ်ကုန်းပတ် box ကို
3x4 topload ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ
Pyp China Toploadloadloader ပေးသွင်းသူ, လက်ကား toplumploaders
Pyp သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း, ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုနှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။Super Clear, ပုံမှန်3"x 4" Toploader (2-1 /2"x 3-1 / 2") တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ် card သည်ကဒ်ပြားကိုပိတ်ထားပြီးပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ အထုပ်နှုန်း 25 toplumbers ။2-1-1 /2"X 3-1 / 2" (63.5 မီလီမီတာ x 88.9.9.9.9.9.9.9mm) စံအရွယ်အစားကဒ်များကိုကိုင်ထားရန်အရွယ်အစားရှိသည်1. ရင်ဆိုင်ကဒ်များကို 35pt အထူအထိ2.Keeps ကဒ်များကိုသန့်ရှင်းပါ3.Tultra ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တာရှည်ခံဆောက်လုပ်ရေးဘောလုံးကဒ်များ, ဘေ့စ်ဘောကဒ်များ, ဘတ်စကတ်ဘောကဒ်များ, Pokemon, Gaming Cards, Attack Card များ, MTG ကဒ်များ, PECS ကဒ်များ, PECS ကဒ်များ,
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသံလိုက်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူစက်ရုံစျေးနှုန်း - P.Y.P ထုပ်ပိုးစက်ရုံ
P.Y.P packing အကောင်းဆုံးသံလိုက်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူစက်ရုံစျေးနှုန်း - P.Y.P ထုပ်ပိုးခြင်း, P.Y.P ထုပ်ပိုးခြင်း, ယနေ့လူကြိုက်များသော topladers, Semi တင်းကျပ်လွှာ, ကဒ်အိပ်စက်ခြင်း,P.Y.P Packing အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသံလိုက်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူစက်ရုံစျေးနှုန်း - P.Y.P ထုပ်ပိုးစက်ရုံ, P.Y.P ထုပ်ပိုးစက်ရုံ, P.Y.P ထုပ်ပိုးစက်ရုံတွင်သင်၏စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုကာကွယ်ရန်အပြည့်အ0အရောင်းအ0န်ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရောင်း0န်ဆောင်မှုပေးသည်
တရုတ်3"x ကို 4" ပုံမှန် Toploaders& Card ကိုအင်္ကျီလက် (100 count ကလက်လီဗူး) ထုတ်လုပ်သူ - P.Y.P ထုပ်ပိုး
တရုတ်3"x ကို 4" ပုံမှန် Toploaders ထုတ်ပိုး P.Y.P& Card ကိုအင်္ကျီလက် (100 count ကလက်လီဗူး) ထုတ်လုပ်သူ - P.Y.P ထုပ်ပိုး, PYP ကုန်ပစ္စည်းများအဘို့သင့်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်, ထိုကဲ့သို့သောဒီနေ့ရဲ့လူကြိုက်များ toploaders အဖြစ်အများဆုံးပြည့်စုံထုတ်ကုန်လင့်များ, တစ်ပိုင်းတင်းကျပ်, ကဒ်အိပ်စက်ခြင်း, သံလိုက်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူရှိပါတယ်
China Card Saver Semi တင်းကျပ်သောကဒ်ကိုင်ဆောင်သူထုတ်လုပ်သူများ - P.Y.P ထုပ်ပိုး
P.Y.P ထုပ်ပိုးတရုတ်ကဒ် Saver Semi Rigi Rigid ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူထုတ်လုပ်သူများ - P.Y.P ထုပ်ပိုးခြင်း, P.Y.P ထုပ်ပိုး, PPY 2000 စတုရန်းမီတာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 100 ကျော်
2-1 /2"x 3-1 / 2" Soft Card Soft
မော်ကွန်းရှင်အဆင့်, အက်ဆစ်အခမဲ့နှင့် PVC ပျော့ပျောင်းသောအင်္ကျီလက်များသည်စံ 2-1 /2ကိုကိုင်ထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ x 3-1 /2" ကတ်များ။ ရှင်းလင်းသော polypropylene မှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အထုပ်နှုန်း 100 ရေတွက်။
1. ပုံမှန်အရွယ်အစားကဒ်များကို 2-5 / 8 အထိရှိသည်။ x 3-5 / 8 "
ခြစ်ရာများထံမှသင်၏စုဆောင်းစရာများကို 2. ရွေးချယ်ပါ
PVC 4.no / အက်ဆစ်အခမဲ့
Dongguan Continenet Fame ထုတ်ပိုး, Ltd. နှစ်ပေါင်းများစွာအတူဝါသနာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
Pyp ။ ProtectYouplay သည်စုဆောင်းထားသော, သိုလှောင်ရန်နှင့်ပြသရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစံချိန်အဖြစ်& LP ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ဂိမ်းကဒ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, အားကစားကဒ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, အရောင်းအဝယ်ကဒ်ပစ္စည်းများ, ရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်& ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ,& နံရံကပ်ကြော်ငြာ& ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးပစ္စည်းများ, toploaders စသည်တို့ကိုပုံနှိပ်။0ါချွန်လုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း, အရည်အသွေးနှင့်0န်ဆောင်မှုများဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။